Daawooyinka ugufiican ee maalinta kadib siyaado badan | Ragga Stylish
Habeennada Kirismaska ​​iyo Sannadka Cusub waa isku mid xafladaha. Sidoo kale cuntada iyo cabbitaannada tuulmooyinka. Luminta isku dheelitirka dabiiciga ah ee xukuma habsami u socodka jirka waa mid aad u fudud. Waxay qaadataa daqiiqado yar in la cuno ama la cabbo aad u badan. Tallaabooyin noocee ah ayaa la qaadayaa ka dib habeenno xad-dhaaf ah?
Haddii jidhku ka dheregsan yahay walxo aan waxtar lahayn sida aalkolada, talaabada ugu horeysa ee la qaado waa inaad si joogto ah biyo ugu ahaato.
1 Dheecaano lumis
2 Xanuun? Sanjabiilku waa ikhtiyaar wanaagsan
3 MAYA dheh si aad u nadiifiso cuntada
4 Jimicsi samee oo naso
Sunta ka timaadda xad-dhaafka ah ayaa jirka u horseedi karta si ba'an u ceyrin (matag ama shuban) walxaha mas'uulka ka ah dib u dhaca. Tani waxay muujineysaa lumis badan oo dareere ah oo ay tahay in isla markaaba la beddelo. Sawirka markii horaba aan fiicnayn ka dib habeen badni, fuuqbax daran laguma dari karo.
Marka lagu daro cabitaanka laba illaa saddex litir oo biyo ah, miraha cusubi waxay kaloo matalaan il kale oo muhiim ah oo cabitaanno ah. Intaa waxaa dheer, waxay bixiyaan fitamiino, macdanno, fiilooyin iyo antioxidants.
Liin dhanaanta ayaa ah xulasho wanaagsan, Maaddaama ay sidoo kale u shaqeyso sidii wakiilka nadiifinta beerka. Midhaha kale ee liinta ee aadka loogu taliyay waa oranjada, miraha leh fitamiin C fara badan, muhiimna u ah xoojinta nidaamka difaaca jirka. Halka casiirka canabku uu ka caawiyo soo celinta isu dheelitirka elektaroolka jirka.
Xanuun? Sanjabiilku waa ikhtiyaar wanaagsan
Si loo yareeyo dhibaatadan dammaanadda leh ee ka timaadda habeennada xad-dhaafka ah - khamriga oo keliya ma aha, laakiin sidoo kale cunidda badan - sinjibiil waa daawo dabiici ah oo wanaagsan. Ka sokow noqoshada dheef-shiidka, waxay bixisaa noocyo badan oo ka mid ah guryaha antioxidant.
Kadib habeen xad dhaaf ah, maalinta ku xigta waa inaad wax cuntaa
Waa wax dabiici ah in markaad toosto subaxa dambe, ka dib "habeen waali ah", rabitaankaaga cuntada wuu kaa dhammaanayaa. Calaamadaha la socda hunguriga, inaad dareento gaajo ama aad rabto inaad wax cuntid kuma jiro liiska. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan in la cuno.
Si jidhku u soo ceshado shaqadiisa, wuxuu u baahan yahay inuu beddelo maaddooyinka qaarkood - antioxidants, fiber, biyaha, fiitamiinnada, iwm..- yaa khasaaray habeenka damaashaadka kadib.
Intaas waxaa sii dheer, haddii ay jiraan xaalado sida kuwa horay loogu soo sheegay matag ama shuban, isku dheelitir la'aanta ayaa la xoojin karaa, iyadoo la gaarayo heerar dhab ahaantii muhiim ah khatarna leh.
MAYA dheh si aad u nadiifiso cuntada
Khubarada badankood waxay tilmaamayaan in kadib cunista xad dhaafka ah iyo kala sooc la'aanta, Raadinta in laga beddelo xaaladda iyada oo loo marayo nadiifinta cuntooyinka waa khalad. Waxay tilmaameen in waxa kaliya ee lagu guuleysan doono ay tahay in laga sii daro xaaladaha xun.
Waxaa lagugula talinayaa inaad isla markaaba qaadatid cunto dheellitiran, hodan ku ah khudaarta iyo miraha cusub. Cunnooyinka ay ku badan tahay dufanka trans waa in gebi ahaanba meesha laga saaraa.
Jimicsi samee oo naso
Tagitaanka orodka subaxa dambe habeenka xad-dhaafka ka dib laguma talinayo.
24-ka saac ee ugu horeeya kadib maalin xafladeed, jirku wuxuu ubaahan doonaa nasasho. Laakiin muddadan ka dib, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in dib loo bilaabo (ama loo maleeyo, haddii ay dhacdo in aysan jirin) nidaam jimicsi jireed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Nafaqeyn » Daawooyinka caafimaadka leh ka dib habeen siyaado ah
Sannadaha Cusub Eve: Beddelka Jasiiradda Tuxedo